Showing ७१-८० of ६५२ items.
दक्षिण भारतीय सुपरस्टार रजनीकान्तसँग जुध्न बलिउडका मै हुँ भन्ने स्टारहरु पनि हिम्मत गर्दैनन् । तर, सलमान खानको कुरा अलग छ । आखिर उनी आफूलाई बक्स अफिसको टाइगर नै त ठान्छन् । हुन पनि ‘ट्वूवलाइट’लाई अपवाद मान्ने हो भने बक्स अफिसमा उनको राम्रै बोलबाला चल्दै आएको छ । त्यसैले होला उनी आफ्नो आगामी फिल्म रेस ३ लाई रजजनिकान्तको फिल्मसँग जुधाउन डराएका छैनन् । तर, रजनिकान्तको २.० को कुरा हामी गरिरहेका छैनौं । सलमानसँग जुध्न लागेको उनको फिल्म हो ‘काला’ । यो फिल्म यसै वर्षको इदमा प्रदर्शन हुने भएको छ । जबकि सलमान पनि आफ्नो फिल्मका लागि इद नै ताकेर बसिरहेका छन् । सलमान यसरी रजनिकान्तसँग जुध्न तयार भए प
प्रकाशित मितिः बैशाख ४, २०७५
प्रदिपको लागि उर्लियो जनसागर
प्रदिप खड्का स्टारर चलचित्र ‘लिलिबिली’ आज पनि देशभर हाउसफूलका साथ रिलिज भईरहेको छ । शुक्रबार नै सुखद ओपनिङ गरेको लिलिबिली हेर्नका लागि आज शनिबार मानवसागर नै उर्लिएको छ । राजधानी मात्र नभई मोफसलका सबै हलहरु हाउसफूल देखिएका छन् ।हिजोबाट नै निर्माण युनिट हल हलमा पुगेका थिए भने आज पनि दर्शक भेट्न राजधानीका विभिन्न हलहरुमा प्रदिप , जसिता , निर्देशक मिलन चाम्स , निर्माता गोपाल शाही लगायत पुगेका थिए । आजको भिडले पनि प्रदिपको क्रेज झनै बढेको स्पस्ट छ । भिडमा पुगेका प्रदिपलाई दर्शकहरुले उचालेर हाईहाई गरेका थिए भने प्रदिपले भने आफना दर्शकहरुलाई अभिनन्दन गरेका थिए । ‘लिलिबिली’ ले सोचे भन्दा राम्रो प्रति
प्रकाशित मितिः बैशाख २, २०७५
एजेन्सी, अहिलेसम्म बलिउडका केही चर्चित नायिकाहरु एमएमएस (MMS) स्याण्डलकको शिकास भएका छन् । बलिउडमा विभिन्न समयमा अभिनेत्रीहरु अश्लिल भिडियो सार्वजनिक भएपछि चर्चा र आलोचनामा परेका थुप्रै उदाहरण छन् ।रिया सेन देखि क्यानट्रिना कैफ सम्म यस्तो विवादमा परिसकेका छन् । को को परे त यस्तो विवादमा ? रिया सेनः अभिनेत्री रिया सेन र अभिनेता अस्मित पटेलले यौन सम्बन्ध राखेको भिडियोले कुनै समयमा निक्कै चर्चा पाएको थियो । अस्मितकी पुरानी प्रेमिकाले बदला लिनका लागि उनीहरुको अन्तरंग सम्बन्ध सम्बन्धी भिडियो वेबमा राखेको खुलासा भएको थियो । इसाबेल कैफः क्याट्रिना कैफकी बहिनी इसावेला कैफ पनि अश्लिल भिडियो काण्डमा
आधुनिक पप विधामा स्थान बनाईरहेका गायक टेकन दाहालको स्वरमा रहेको नयाँ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। ‘तिमीबाट…’ बोलको यस गीतमा शब्द तथा संगीत कमल खत्रीको रहेको छ। भिडियोमा नायिका स्वस्तिमा खड्का र मोडल सचिन अधिकारीको अभिनय छ। भिडियोलाई विकास सुवेदीले निर्देशन गरेका छन्। मोडल सचिनले यसै गीत मार्फत अभिनयमा डेब्यू गरेका हुन्। गीतले प्रेमी-प्रेमिकाको अञ्जानको गल्तीले निम्त्याएको घटनाको बयान गरेको छ। गर्भवती बनेपछि खुशी बनेकी प्रेमिकाले प्रेमीलाई यो कुरा सुनाउँदा बेवास्ता गरेपछि प्रेमिकाले आत्महत्या गरेपछिको भावनात्मक पागलपनलाई गीतको भिडियोमा प्रस्तुत छ। भिडियोको छायांकन अनिल के मानन्धरले गरेका छन्
४२३ पटक पढिएको
प्रियंकाको सेल्फीमा आयुषमानको पुर्वप्रेमिका
कुनै समय प्रेम सम्बन्धमा रही ब्रेकअपपछि बोलचाल हुँदा त खबर बन्छ भने उक्त जोडी एउटै स्क्रिनमा देखिनुले राम्रै चर्चा कमाउँनु स्वभाविक नै हो । यस्तै चर्चा कमाईरहेको आयुषमान , प्रियंका र परमिताको जोडीले पनि । ‘चपली हाईट २’ मा एकसाथ काम गरेपछि प्रेम सम्बन्धमा रहेका आयुषमान र परमिताले सार्वजनिकरुपमै आफनो प्रेम स्वीकार गरेका थिए । तर पछि प्रियंकासंग आयुषमानले ‘कथा काठमाडौँ’ मा काम गरेपछि उनैसंग नजिकिए । त्यतीबेला परमितालाई धोका दिएको भन्दै आयुषमानले कम गाली खानु परेन भने प्रियंका पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । परमिताले पनि आयुषमानले धोका नै दिएको भन्ने अप्रत्यक्षरुपमा भनेकी पनि थिईन् तर केही समय अगाडीमा
प्रदिप र साम्राज्ञीलाई जोडी बन्न जुरेन
निर्देशक दिनेश राउतले निर्देशन गर्ने भनिएको चलचित्र ‘भैरवी’ मा नायक प्रदिप खड्काको नाम जोडिएको कारण नै चर्चामा थियो । त्यतीमात्र नभई यस चलचित्रमा साम्राज्ञीको पनि नाम थपियो । उक्त चलचित्रमा प्रदिपकी नायिका बनेर साम्राज्ञीले पहिलो पटक स्क्रिन सेयर गर्ने भन्दा दुबैका फ्यानहरु निकै खुसी थिए । तर यो चलचित्रमा साम्राज्ञी अनुबन्धित नभएको बताएकीछिन् । ‘भैरब’ को अफर आएको , स्क्रिप्ट पनि सुनाईएको तर पक्का भने नभएको बताईन् । भैरबीको बारेमा बोल्दै साम्राज्ञीले भनिन् “भैरबीको स्क्रिप्ट मन परेको थियो मैले दिनेश राउतलाई हुन्छ पनि भनेको थिए तर २०/२५ दिन सम्म निर्माण युनिटबाट कुनै खबर आएन त्यसैले ‘कायरा’ लाई
मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडाका आमा-बुबा नै सांसद
काठमाडौं -पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा अध्ययनरत श्रृंखला खतिवडा यो वर्षको मिस नेपाल बनेकी छिन्। बुधबार भएको फिनालेमा २४ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उनले मिस नेपाल– २०१८ को उपाधी जितेकी हुन्। हेटौंडाकी उनका बुबा आमा नै सांसद छन्। बुबा बिरोध खतिवडा केन्द्रीय संसदमा छन् भने आमा मनु सिग्देल ३ नम्बर प्रदेशकी सांसद हुन्। बेलुका राजधानीमा भएको फिनालेमा २४ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उनी मिसन नेपाल भएकी हुन्। उनी आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङकी बिद्यार्थी हुन्। त्यस्तै गोरखाकी मनिता देवकोटाले मिस नेपाल युनिभर्स, काठमाडौंकी प्रिया सिग्देल मिस नेपाल अर्थ, काठमाडौंकै २२ वर्षीया रोनाली अमात्य मिस नेपाल
श्रृङ्खला खतिवडालार्इ ‘मिस नेपाल’को ताज
यो बर्षको ‘मिस नेपाल वल्र्ड’को उपाधि श्रृङ्खला खतिवडा ले जितेकी छिन् । प्रतिस्पर्धामा सहभागी अन्य २४ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उनले ‘मिस नेपाल वल्र्ड’को उपाधि जितेकी हुन् । प्रतिस्पर्धाका प्रमुख निर्णायक गोविन्द गजुरेलले सोधेको–‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हुनका लागि ३ वटा काम के गर्नुपर्ला ?’ यो प्रश्नको उत्कृष्ट जवाफ दिदै उनले ‘मिस नेपाल २०१८’को उपाधि जितेकी हुन् । उनले उपाधि जितेसँगै ‘मिस वल्र्ड’मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर समेत पाएकी छिन् । उनलाई ‘मिस नेपाल वल्र्ड’ निकिता चण्डकले क्राउन पहिराइदिएकी थिइन् ।
‘आफ्नो लडाइँमा म बेसहारा छु । किनकी मेरो पीडा कसैले देखेन त्यहि कारण मैले यति ठूलो कदम उठाउनु पर्‍यो । मैले सार्वजनिक स्थानमा कपडा उतारेँ ।’ यो भनाइ हो तेलुगु नायिका श्रीरेड्डी मल्लिडीको । तेलुगु फिल्म उद्योगमा यौन उत्पीडनको बिरुद्ध आवाज उठाउँदै गएको हप्ता हैदराबादको फिल्म नगरमा मुभी आर्टिस्ट एसोसिएशनका अगाडि श्रीरेड्डीले आफ्नो कपडा उतारेकी थिइन् । श्रीरेड्डीका अनुसार आफ्नो कुरा सुनाउनका लागि एवं आफ्नो मागका विषयमा सरकारको जवाफ लिन यहि एउटा बाटो बाँकी थियो । ‘फिल्म दुनियाका ब्यक्ति मेरो नाङ्गो तस्विर एवं भिडियो पठाउन आग्रह गर्छन् भने सार्वजनिक स्थानमै कपडा किन नउतारुँ,’ उनले भनिन् । श्रीरे
प्रकाशित मितिः चैत्र २८, २०७४
जेलबाट छुटेपछि सलमानलाई भेट्न बलिउडका को-को सेलिब्रिटी गए?
(एजेन्सी)- कृष्णसारको सिकार प्रकरणमा दोषी ठहर भएका बलिउड सुपरस्टार सलमान खानले शनिबार जमानत पाए। जोधपुरको केन्द्रीय कारागारमा तीन दिन हिरासतमा बसेर शनिबार साँझ रिहा भएपछि उनी मुम्बईतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। राति साढे ८ बजे उनी आफ्नो निवास ग्यालेक्सी अपार्टमेन्ट पुगेका थिए। सलमान त्यहाँ पुग्नु अगावै उनको निवास बाहिर हजारौं प्रशंसकको भीड लागिसकेको थियो। घरको बार्दलीमा उभिएर सलमानले सबैको अभिवादन स्वीकार गरे। प्रशंसकसँगै बलिउडका सेलिब्रिटीहरुको सलमानको घरमा ताँती नै लाग्यो। सलमान घर पुगेको करिब एक घन्टापछि केटरिना कैफले उनलाई भेटिन्। यस्तै, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा सहितका कैयौं सेलिब्रिटी उनको